သင် Siri ကိုကြိုက်လား? ဤအနည်းငယ်သာသိသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုစစ်ဆေးပါ ငါက Mac ပါ
သင် Siri ကိုကြိုက်လား? ဤအသေးငယ်တဲ့လူသိများလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထွက်စစ်ဆေးပါ
Siri သည်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Sierra ၏ MacOS ဗားရှင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်။ တကယ်တော့, ဒီလျှောက်လွှာအမျိုးအစားများ၏တိုးတက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ကပိုမိုလွယ်ကူစေရန်, ကြီးထွားလာရပ်တန့်မထားဘူး။
အဝိဇ္ဇာအားဖြင့်, ကျွန်ုပ်တို့သည် Siri ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည် Siri ကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်မသိသေးသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာမည့် Hey Siri ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်ပလီကေးရှင်းစာမျက်နှာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှုပ်ထွေးစေသောအနည်းငယ်မျှသော application ကိုရှာသည်။ တစ်ဖက်တွင်အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များကဲ့သို့ သူတို့သည်ကြော်ငြာများသို့မဟုတ်အလှူငွေများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ကြသည်။ သူတို့ကစာမျက်နှာရဲ့အဆုံးမှာသင့်ကိုပညာရှိစွာတောင်းခံပါလိမ့်မယ်၊ စာမျက်နှာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်သင့်မှာကြော်ငြာမရှိပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ကနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်စာမျက်နှာကိုစတင်စတင်လိမ့်မယ် setting ကို MacOS Sierra (သို့) iOS အတွက်ညွှန်ကြားချက်များလိုချင်လားရွေးချယ်ပါ။
ဤ အချိန်မှစ၍ သင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်လိုအပ်သောညွှန်ကြားချက်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အမျိုးအစားများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ သင့်ကိုမဘွားစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအများဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောရွေးချယ်စရာပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရသာအမျိုးမျိုးအတွက်အမျိုးအစားများရှိသည်။
ပွောငျးခွငျး ယူနစ်၏။ : အရှည်၊ အလေးချိန်၊ ငွေကြေး၊ အချိန်၊ ထုထည်၊ မေးခွန်းမေးခွန်း - ဒေါ်လာတစ်ထောင်ဆိုတာဘယ်လောက်လဲ။
တွက်ချက်မှုများ သင်္ချာပညာရှင် - သူ့ကိုဖြည့်ခုတ်၊ နုတ်၊ တိုး၊ သင်တို့မူကားစတုရန်းအမြစ်များသို့မဟုတ်surfacesရိယာမျက်နှာပြင်များလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရက်စွဲများကိုတွက်ချက်ပါ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအထိရက်များ၊ ဥပမာခရစ္စမတ်အကြိမ်မည်မျှရှိသည်။
E-Mail က: ဒါဟာအလွန်လက်တွေ့ကျသည်။ သင်၏အီးမေးလ်ကိုအသစ်ပြောင်းရန်၊ နောက်ဆုံးအီးမေးလ်ကိုဖတ်ရန်၊ ကာမဲန်မှဥပမာအီးမေးလ်လက်ခံရရှိသလားသို့မဟုတ်ဟိုဆေးမှအီးမေးလ်များကိုပြရန်သူ့ကိုပြောပါ။
ပြက္ခဒိန်၊ သတိပေးချက်များနှင့်မှတ်စုများ - အစည်းအဝေးတစ်ခု၊ သတိပေးမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အလုပ်တစ်ခုထည့်ပါ။ လာမည့်ဖြစ်ရပ်များအကြောင်းမေးပါ။ X အချက်အလက်များကိုသတိပေးမှုသို့မဟုတ်မှတ်စုစာရင်းသို့ထည့်ပါ။ အောက်တိုဘာမှတ်စုများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုပါ။
မြေပုံများနှင့်အညွှန်း: ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသို့နေရာတစ်ခုသို့ကားမောင်းရန် (သို့) အီတလီမြေပုံကိုဥပမာအဖြစ်ပြသရန်မည်မျှကြာသည်ကိုယာဉ်အသွားအလာအချက်အလက်အတွက် Siri ကိုမေးပါ။
အသိပညာ အထွေထွေဗဟုသုတနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ - တရုတ်နိုင်ငံ၏လူ ဦး ရေသည်အဘယ်နည်း။ rest ၀ ရတ်သည်မည်မျှမြင့်သနည်း။
ကျပန်းဆုံးဖြတ်ချက်များ - အခွင့်အလမ်းဂိမ်းများအတွက်တရားဝင်။ ဥပမာ - တစ်ခုကနေတစ်ဆယ်ကနေနံပါတ်တစ်ခုကိုပြောပြပါ။
သင်္ကေတ သင် Siri ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါသည်၊ ၎င်းကိုအခြားအပလီကေးရှင်းများမှပြုလုပ်သည်၊ သို့သော် "ကာလ"၊ "ကော်မာ" သို့မဟုတ် "မေးခွန်းအမှတ်အသား" ဟုပြောသည့်အခါ Siri အသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
ဒီနေ့အထိအင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျာမန်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသည်။ သို့သော်ငြားလည်း, Siri ကိုအဆက်မပြတ်လေ့လာနေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းစာမျက်နှာတွင်သတင်းများပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရပြီး၎င်းစာမျက်နှာက၎င်းတို့အားစုဆောင်းလိမ့်မည်။ ဤအတွက်ငါအခါအားလျော်စွာသင်၏အလည်အပတ်ခရီးအကြံပြုပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » သင် Siri ကိုကြိုက်လား? ဤအသေးငယ်တဲ့လူသိများလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထွက်စစ်ဆေးပါ